မွေးသက္ကရာဇ် ၁၉၃၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့
မိဘအမည် ဦးမောင်ဒွေး + ဒေါ်ကျော့စိန်
ရရှိသည့်ဆု အမျိုးသားစာပေဆု ဘာသာပြန်၊သုတ (၂၀၀၁)၊ ဘာသာပြန်၊ရသ (၂၀၀၄) (၂၀၀၇)(၂၀၁၁)(၂၀၁၂)
၃ ထုတ်ဝေခဲ့သော စာအုပ်များ
ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာတခရိုင် စစ်ကျွန်းရွာတွင် အဖဦးမောင်ဒွေး၊ အမိဒေါ်ကျော့စိန်တို့က ၁၉၃၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ ရေကျော်ဦးမောင်မောင် အလွတ်ပညာသင်ကျောင်းတွင် အလယ်တန်းအောင်ပြီး တောင်ကြီးမြို့၊ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်း (ယခု အထက-၁)မှ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်သည်။
၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ဘီအိုစီကုမ္ပဏီ (ယခု MOGE)တွင် အလုပ်ဝင်ပြီး ၁၉၉၄ - ခုနှစ်တွင် ငွေစာရင်းအရာရှိအဖြစ်နှင့် အငြိမ်းစားယူသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် သည်းဦးပန်းမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် အထောက်တော်လှအောင်၏ သတင်းမဂ္ဂဇင်းတွင် ဒုတိယ အယ်ဒီတာချုပ် တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် နာမည်ရင်းဖြင့် ငွေကျွန် (World Rapers by Jonathan Black) ကိုမြတ်ငြိမ်းနှင့် တွဲပြီးဘာသာပြန်ခဲ့သည်။ ယနေ့အထိ
သံယောဇဉ်ကမ်းခြေ(၁၉၈၃) (Man on Fire by A.I. Quinnell)၊
အချစ်၏အခြားသော မျက်နှာစာ(၁၉၈၃)(Rendezvons by Evelyne Anthony)၊
ငယ်စာရင်းဝင်ဖို့ (၁၉၈၄) (Not asaStranger by Morton Thompson)
သံမဏိလိပ်ပြာ (၁၉၈၇) (Philadeiphian by Richard Powell)
အရိပ်မဲ့ရုပ်ပုံလွှာ (၁၉၈၅) (Snap Shot by A.J. Quinnell)
မဟာရံတံတိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း (၁၉၈၅) (This Side of Glory by Gwan Bristow)
မေတ္တာရှာပုံတော် (၁၉၈၅) (Where Love has Gone by Herold Robin)
တမ်းတတက်သည် (၁၉၈၅) (Remenberance by Dannielle Steel)
အချစ်များစွာနဲ့ဆရာ (၁၉၈၇) (To Sir With Love by E. R. Branthwaite)
နွေကန္တာ (၁၉၈၈) (Deep Summer by Gwen Bristow)
မာနမီးလျှံ (၁၉၉၉) (Body of Love by Charles Keats)
မဒမ်ကျူရီ (၂၀၀၁) (Madame Curie by Eve Curie)
လေရဟတ်နီ (၂၀၀၄) (Moulin Rouge by Pierre la Mure)
တောင်ပံမဲ့သင်းကွဲတေးဆိုငှက် (၂၀၀၄) (To KillaMocking Bird by Harper Lee)
စကားလက် (၂၀၀၆) (Scarlett by A Lexandra Ripley)
အပါအဝင် ဘာသာပြန်စာအုပ်ပေါင်း (၄၅) အုပ်ကို ရေးသားခဲ့သည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားစာပေဆု (ဘာသာပြန်၊သုတ) ကို မဒမ်ကျူရီစာအုပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ် (ဘာသာပြန်၊ရသ) ကို တောင်ပံမဲ့သင်းကွဲတေးဆိုငှက်စာအုပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်လည်း (ဘာသာပြန်၊ရသ)အမျိုးသားစာပေဆုကို အနက်ရောင်အိပ်မက် စိမ်းမြမေတ္တာ စာအုပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်လည်း မျှော် စာအုပ်ဖြင့် (ဘာသာပြန်၊ရသ)စာပေဆုကိုလည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ် စာအုပ်ဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ဘာသာပြန်၊ရသ စာပေဆုကိုလည်းကောင်း ရရှိခဲ့သည်။
မေရီကက်ဆက် သို့မဟုတ် အရောင်များနှင့် စကားပြောသူ